Home || Online Tahalka महिला अधिकार, हरियो साउन र श्रीमानको आयु
साउन महिना शुरु भएसँगै हिन्दू नारीहरुले हात भरि हरियो चुरा, मेहेन्दी र हरियो पहिरनमा देख्न सकिन्छ । कतिपय महिलाहरु श्रीमानको दिर्घायु हुन्छ भन्ने विश्वासमा त कतिपयले सुन्दरताको लागी भन्द हरियो चुरा र हरियो कपडा लगाउने गरेको बताउछन् । साउन महिनामा हरियो चुरा र कपडा लगाउनाले भाग्य वलियो हुने जनविश्वास व्याप्त देखिन्छ । साउन महिनामा प्रकृतिको पूजा गर्ने गरिन्छ । हरियो चुरा र साडी लगाएर महिलाहरुले प्रकृतिलाई विशेष पुजा अर्चना गर्छन जसका कारण आफ्नो र श्रीमानको आयू समेत बढ्छ भन्ने जनविश्वास समाजमा व्याप्त रहेको देखिन्छ ।
साउन महिनामा हरियो पहिरनमा सजिदा शिव भगवान खुसी हुने धार्मिक विश्वास छ । हरियो लाउदा जिवन हराभरा हुन्छ र जिवनसाथिको पनि आयु लामो हुन्छ भन्ने विश्वासले त जरा नै गाडेको छ । तर विडम्बना पिडित महिलाहरुले आफुले जीवन भर साथ दिने र साथको अपेक्षा गरेको जीवन साथीले समेत अपेक्षा अनुसारको साथ नदिदाको अवस्थामा जीवनमा हरियाली छाउनु त परको कुरा उनिहरुको जीवन नै उजाड भएको तमाम उदाहरण हाम्रै सामु छन् ।
साउन महिनाको शुरुमैै कामको शिलशिलामा पंक्तिकार शारदा नगरपालिकको एउटा गाँउमा पुग्दा घरेलु हिंसा पिडित महिला सिता (नाम परिवर्तन) संग भेट भयो । सीता एउटा यस्ती महिला हुन जस्ले साउन त के कुनै पर्वमेला रमाइलो आदि इत्यादी आएको गएको कुनै अत्तोपत्तो हुदैन । पाँच जना छोरीकी आमा सिताको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ ।
तर सितालाइ छोरीहरुको पालनपोषणका लागी कसरी आर्थिक जोहो गर्ने र श्रीमानको गाली बेईज्जती बाट कसरी बच्ने भन्ने कुराको दिनभर तनाव हुन्छ । भारी अनुहार लिएर घरी गाईवस्तु चराउन त घरी बाख्रालाई घांस काट्नमै आप्mनो दिनहरु बिताई रहेकी छन् । अझ ति छोरीहरुको शिक्षा दिक्षा र मिठो मसिनो खाने त परको कुरा । सिता त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । सिता जस्ता तमाम महिलाहरुलाई कहिले छुने हरियो साउन र मेहन्दीको रङ्गले ?
कुरा यत्तिमा मात्रै सिमित छैन । शारदा नगरपालिका भित्रकै कुनै गाँउमा बस्ने उनिलाई श्रीमानले छोरा जन्माउन सक्दिनस भनेर जहिले पनि कुट्ने, गाली गर्ने र अपहेलना गर्ने गरेको उनि बताउछिन् । ‘मेरो पाँच छोरी छन्, जेठीको बिहे भई सक्यो, जेठी छोरी को कोख बाट पनि छोरी जन्मेकी छ’–उनले भनिन्–‘तर मेरो उहाँलाई भने अझ छोरा चाहिएको छ ।’
दुई महिना भयो पछिल्लो पटक गर्भपतन भएको । यस संगै गर्भ पतन भएको चार पटक भई सक्यो । कति पटक त उहाँले जाँच्न लगेर पनि गर्भ पतन गराउन लगाउनु भयो । कति पटक आफै कोख रित्तियो । शरीरनै कमजोर भई सकेको छ । पहिला जस्तो कामपनि गर्न सकिदैन् । घरगृहस्थी गर्न छाड्ने हो भने छोरीहरुको पिर लाग्छ । उहाँले भने चौबीस घण्टानै रक्सी खाएर कराउने गर्नु हुन्छ ।
कुरा गर्दै जाँदा पंक्तिकारको ‘सबैको हातमा हरियो चुरा छ तपाईले लाउनु भएन्? साउन मा हरियो चुरा, हरियो कपडा लगाउने हो भने श्रीमानको आयु लामो हुन्छ भन्छन् त ?’ भन्ने जिज्ञासामा उनको जवाफले मलाई भित्रै देखी हल्लायो । सिताको के को हरियो चुरा लाउनु र किन लाउनु बरु श्रीमानको आयु घटाउने चुराको कुनै रंग हुन्छ भने त्यस्तो लाउने थिए भन्ने जवाफले सोच्न वाध्य बनायो ।
म अच्चम्ममा परे अनि भने किन यस्तो दिदि ? उनको आँखा बाट बर्बती आंसु बग्न थाल्यो र एक छिन पछि उनले भनिन् श्रीमानले माया गर्ने, छोराछोरी पाल्न लाई केही कमाएर ल्याउने भएपो श्रीमानको लामो आयुको लागी धर्म,वर्त गर्नु । जो श्रीमान संग सुत्दा भोली बांचिन्छ कि बांचिदैन भन्ने डरका साथ ओच्छ्यानमा सुत्नु पर्छ, आंखा चिम्लिंदा घांटीनै थिचेर मारदिन्छ कि भन्ने डरका साथ अबेर राती निदाएको पत्तो पाईदैन् यस्ता श्रीमानको लामो आयुको हैन छोटो आयुको कामना गर्छु म ।
उनको मुख बाट शब्द नै राेिकएनन् उनि धाराप्रवाह भन्दै आफ्ना वेदनाहरु पोख्दै गइन । तपाई हरुजस्ता लाई पो साउन आउछ, तीज आउछ, दशैं आउछ, हाम्रो लागी त यो कुनै पनि चाड पर्व नआएपनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । पोईले रक्सी खाएर माईत जान पनि दिंदैन र माईत आको छोरी बहिनि संग पनि दुव्र्यवहार गर्छ । चाड पर्वमा माईत आएकी छोरी बहिनिलाई एक छाक मिठो खुवाउन त परै जाओस चाहिने नचाहिने बोलेर छिट्टै फर्केर जाने बनाउछ अनि के को चाडपर्व मनाउने ?
आफुलाई माईती गएको बेला कोसंग सुतेर आईस अब मेरो घरमा बस्न पाईदैन भन्दै कुटपिट शुरु हुन्छ के गर्नु यो पीर त जुनी भरी रही रहने भयो । तपाईलाई श्रीमानले यस्तो दुख दिन्छ भने किन सहेर बसी रहनु भएको छ त ? मैले भने प्रहरीमा जाहेरी दिनु न । न्याय पाउनको लागी किन पहल गर्नुभएको छैन ?
ं प्रहरीमा त गएकी छैन् यहाँ गाँउमा ठुला बडा मान्छे हरुसंग त कति पटक छलफल गराई सके उनिहरु का अगाडी अब देखी यस्तो गर्दिन् भन्दे माफी माग्छ तर घर आएपछि फेरी उहि कुटपिट अनि गाली गलौज शुरु हुन्छ । प्रहरीमा भने पनि केही दिनको सजाय भोगेर फेरी घर आउला अनि यो घरमा बस्न दिदैन मेरो छोरीहरुको बिच्चल्ली हुन्छ भन्ने डरले जान सकेकी छैन् ।
यस्तै शिद्धकुमाख गाउँपालिका ३ की एक महिला विगत ३ वर्षदेखि घरेलु हिंसाको चपेटामा छिन् । पक्तिकारसँगको भेटमा उनले श्रीमानले आफुलाई तिनवर्षदेखि बेवास्ता गरेको बताइन । काठमाडौँमा बस्दै आएका श्रीमान घरमा आउदैनन् । घरमै बस्दै आएकी उनलाई परिवारका अन्य सदस्यहरुले घरमा बस्न दिएनन् । परिवारका सदस्यहरुले घरमा बस्न नदिएपछि उनि माइतिमा बस्दै आएकी छन् ।
एक छोराकी आमा उनलाई श्रीमानले घरमा बसेमा ज्यान मार्ने धम्की दिने र घरमा बसेको वेला कुटपिट गरेको उनले बताइन । श्रीमानले घरमा बस्नै नदिने जता जान्छेस जा म तलाइ अव मेरो घरमा बस्न दिन्न भन्दा कम्ति पिडा हुदैन । उनले भनिन कम्तिामा पनि आफुलाइ के कारणले श्रीमानले वेवास्ता गरेको भन्ने थाहा भए चित्त बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो । हामी जस्तालाइ त के हरियो चुरा, के मेहन्दी अनि के चाडवाड ।
यि त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । महिलाहरुको एउटा ठुलो तप्का जसकोे मनको कालो पखालिन नसक्दा साउनको हरियोले अहिले छुन सकेको छैन । ग्रामीण भेगका अधिकाँश महिला हरुको उस्तै पीडा लुकेको छ । कतिपयले श्रीमानबाट त कतिपय महिलाले घरपरिवारका अन्य सदस्यबाट कुनैनकुनै तरीका बाट हिंसा भोग्नु परि रहेको छ ।
ज्योतिषहरुका अनुसार पनि हरियो रंग सौभाग्यको रंग मानिन्छ । साथै साउन महिनामा प्राकृतिक रुपमा पनि जताततै हरियाली छाएको हुन्छ जसका कारण जताततैको हरियालीले सबैको मनलाई मोहित पार्ने गर्दछ । यो महिनामा मानिस प्रकृतिसँग आफूलाई जोड्न चाहन्छ । यस महिनाले प्राकृतिक रुपले हरियालीका साथै मनलाई छुट्टै आनन्दको अनुभुति दिलाउछ । साउन महिनामा शिवजीको पुजाआजा र भक्ति गर्नाले मनले सोचेको मनोकामना पुर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहदै आएको छ ।
तमाम रुपमा एउटा वर्गमा साउने उमंगका कारण यस्तो देखिएता पनि ग्रामिण भेगमा रहेका महिलाहरुको अवस्था भने अलि फरक छ । ग्रामिण क्षेत्रमा महिलाहरुको एउटा ठुलो तप्का महिला हिंसाको चपेटामा छन् । पिडित महिलाहरुले जति पुजा गरे पनि, जति हरियो लाए पनि र जति कोशिस गरेपनि हिंसाको घेरा बाट माथि उठ्न नसकेको यथार्थ हाम्रै अगाडि छर्लंग छ ।
साउनको हरियो प्रकृति जस्तै आफुलाई पनि हरियो हराभरा बनाउने र जिन्दगीको मज्जा लिने रहर कस्लाई पो नहुदो हो र तर साउन महिनामा हरियो रङ्गका कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक हुन अनि प्रकृतीको मनोरम लाभ लिन खोजे पनि प्रकृतिले समेत आफुलाई जिस्काइरहेको भान उनिहरुलाई हुन्छ । तर पारिवारिक काम र पारिवारिक हिंसाले थिलथिलो परेका पिडितका मनमा साउनमा हरियो लगाउदा प्रकृतिको साथ रहने र भाग्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा रतिभर विश्वास छैन । परिवारलाई रिझाउनु र कामधन्दा गर्नु नै उनिहरुको दैनिकि हुन्छ जसमा उनिहरु माथि हुने पारिवारिक र घरेलु हिंसा त छदैछ ।
घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसा भौग्दै आएका ग्रामीण भेगका महिलाहरु सकेसम्म आप्mनो पिडा लुकाउने कोशिश गरि रहेका हुन्छन् । जति हिंसामा परेपनि यहाँका ग्रामीण भेगका महिला अझैपनि न्याय पाउनका लागी कानुनी रुपमा अगाडी बढेको पाईदैन् । त्यो कुरा त माथी पनि सिताले भनेकी छिन् । श्रीमान लाई प्रहरीमा लगे आफु कहाँ जानु ? कसरी त्यो घरमा बस्नु ? तर सबै विकल्प बन्द हुदा मात्र प्रहरी ,प्रशासन र अदालत सम्म यस्ता घटना र मुद्दाहरु आउने गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५मा जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा ६८ महिला न्याय पाउनका लागी आएको प्रहरी को तथ्याँकमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा यस अवधिमा घरेलु हिंसाका ३३ वटा तथा सामाजिक हिंसाका ३५ वटा लिखित उजुरी परे । उनिहरु मध्ये अधिकाँश महिलाको दैनिकि उस्तै छ ।
यस्तै जिल्ला अदालत सल्यानमा सम्वन्ध विच्छेदका १ सय १ र अंश सहित सम्वन्ध विच्छेदका ३२ गरी १ सय ३३ मुद्दा परेको अदालतको तथ्याकंमा उल्लेख छ । जिल्ला न्याधिश मदन बहादुर धामीका अनुसार जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु वर्षै पिच्छे बढ्दै गएका छन् । यहाँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने सबै भन्दा बढी १४ देखि १९ वर्ष उमेर समुहका किशोरीहरुले सम्वन्ध विच्छेदको निवेदन दिने गरेका छन् । यसलाई न्युनिकरण गर्न सचेतना बाहेक अरु केही पनि कार्यक्रम यहाँ भएका छैनन् ।
यो या त्यो कारण देखाएर महिला हरुलाई हिंसामा पारिदै आएको छ । अथवा कतिपय घटनामा त बिना कारण पनि महिला हरुले हिंसा भोग्नु परि रहेको छ । हिंसामा परेका महिलाहरुका लागी आउने चाडवाडहरु उनिहरुको उमंग र हासोको लागी हैन नुनचुक छर्केर जाने उत्सव बनिरहेका छन् । एकातर्फ शहरिया महिलाहरु तडकभडकपुर्ण जिवनशैली जसले ग्रामिण महिला र शहिरिया महिलाविच ठुलो खाडल श्रृजना गरेको छ । अर्कोतर्फ ग्रामिण महिला जो घरबाटै हिंसापिडित भएर वाँचिरहेका छन् । उनिहरुले भोलिको सम्वन्ध हेरेर आफ्नै घरपरिवार विरुद्ध कानुनी प्रकृयामा आउन सकेका छैनन भने हिंसालाई भित्रभित्रै राखेर वाँचिरहेका छन् ।
यसका लागी राज्यले उपयुक्त निति बनाउनु आवश्यक छ । राज्यले सवै महिलाहरुलाई एउटै निति बनाएर हेरेकै कारण हिंसा पिडित महिलाहरु हिंसा सहेरै वाँचिरहेका छन् । अर्कोतर्फ संघसंस्थाका सामाजिक अभियान पनि परियोजनामुखि जन जसले दिगो रुपमा लिन सकेका छैनन् । राज्यले यस्ता पिडित महिलाहरुका लागी ठोस कदम नचाल्दा सम्ममा यस्ता अदृश्य तथा भयानक महिला हिंसाबाट ग्रामिण भेगमा महिलाहरु युगौँयुग सम्म पिडित भइराख्नुपर्ने छ ।